သျှင်နေမင်း: December 2011
တွင်တွင်ကြီးတွေ့နေရတယ် ကျနော်အားလုံးကိုလေးလေးစားစားဖတ်ပါတယ်။ ယခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အတွေးအခေါ်၊အယူအဆရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်အရာရာကိုသတိထားလုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိ၍ ဤ စာဖြင့်ကျနော့်အမြင်အယူအဆကိုတင်ပြရေးသားအပ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်အယူအဆကိုယ်စီရှိကြစမြဲပါ၊ဒီအတွေး အခေါ် အယူအဆတွေတသမတ်တည်းအားလုံးတူညီမယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သလို၊အားလုံးကွဲလွဲမယ်ဆိုတာလည်းမမှန်ပါ ။တူတဲ့အခါတူမယ် ၊မတူတဲ့အခါမတူ ရှိကြမှာပါ ဒါဟာ
ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်း၊ ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ခြင်း ၊သဘောတူထောက်ခံခြင်းများဟာ
နိုင်ငံရေး ၊ဘာသာရေး ၊လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင်အမြဲဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြင့်သာပြေလည်အောင်အဖြေရှာမှအဖြေမှန်ရမှာပါ ၊ပဋိပက္ခဆိုတာ
အမြဲရှိနေမှာပါ ၊ဒါကို မိတ်ဖက်ပဋိပက္ခ လား ရန်ဖက်ပဋိပက္ခလားဆိုတာခွဲခြားရမှာဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဖက်ပဋိပက္ခ ဆိုရင် မိတ်ဖက်အသွင်ဖြင့် တူတာကို တွဲလုပ် ၊မတူတာကိုခွဲလုပ် ဆိုတဲ့
နည်းနှင့်ဖြေရှင်းမှသာ အဖြေမှန်ရမှာပါ ၊ထိုနည်းသည် နာကျည်း လမ်းခွဲစရာအကြောင်းမရှိပါ
အမှန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်ဖက်ပဋိပက္ခ ဆိုခဲ့ရင် စည်းခြား ၊
ပြတ်သားဘို့လိုအပ်ပါတယ် တွေဝေလို့မရပါ ။
တားဆီးလို့မရပါ ဒါဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ် ၊မိမိအယူအဆပေါ်အခြေခံ၍
လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ထောက်ပြပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ် ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စပါ ။
သို့သော် မိမိဝေဖန်ထောက်ပြမှုသည် မိမိဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာရှင်းဘို့လိုပါသည်၊
ကြပါတယ်ဒါကိုသတိထားဘို့လိုပါတယ် မိမိဝေဖန်ထောက်ပြမှုသည် တိုင်းပြည်အကျိုး ၊
အဖွဲ့အစည်းအကျိုး ၊လူပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးအတွက် အပြုသဘောဆောင်ပြီးမိတ်ဖက်အသွင်
ပါတယ်၊အကယ်၍ မိမိဝေဖန်မှုသည် တပါးသူပျက်စီးစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်
လုပ်ဆောင်ခဲ့သော် ထိုလုပ်ရပ်သည် လုံးဝမလုပ်ထိုက်သောအလုပ်ဖြစ်သလို ၊
လူ့လောက ကလက်မခံသောအလုပ်ဖြစ်တယ် ရှောင်စေချင်ပါတယ်။
သော NLD က သူတို့ယုံကြည်ရာ အတွေးအခေါ်အယူအဆဖြင့် မဟာဗျူဟာအသစ်
ထွက်ပေါ်လာပြီး ဝေဖန်သံ ၊ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သံ ၊ ထောက်ခံအားပေးင်္သတွေ
နိုင်ငံရေးလောကမှာပွက်လောရိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် တချို့က အာဏာရှင်
ကို လူထုတိုက်ပွဲဖြင့်သာ ဖြုတ်ချလို့ရမယ်လို့ ယူဆသူကယူဆ ၊တချို့က လက်နက်ကိုင်
တိုက်မှသာ ရမယ်လို့ယုံကြည်သူကယုံကြည် ၊တချို့ကအာဏာရှင်ကိုပူးသတ်မှထိရောက်
မယ်လို့ဆိုသူကဆို နဲ့ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးကွဲလွဲနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်၊
မိမိအယူအဆမှန်တယ် ၊သူ့အယူအဆမှားတယ် နဲ့အငြင်းပွားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ
သလောက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြခြင်းအပေါ် ကျနော့်အမြင်သဘောထားကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ကျနော်တင်ပြခဲ့သော အတွေးအခေါ်အယူအဆကွဲလွဲချက်တွေဟာကျနော့်အနေဖြင့်
ဘယ်အယူဆကမှားယွင်းတယ် ၊ဘယ်အယူအဆကမှန်ကန်တယ်လို့မဝေဖန်လိုပါ ၊အခြေအနေ
သမိုင်းစဉ်အရအခြေအနေကွဲပြားစွာ တခုချင်းအောင်မြင့်ခဲ့တဲ့သာဓကရှိခဲ့လို့ဘဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကျနော့်အမြင်အရ ယခုအတွေးအခေါ်ကွဲလွဲနေကြသော ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများဟာ
( ၁ ) စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်ညီသောစံနစ်သစ်တခုပေါ်ပေါက်ရေး
ဟူသော ပန်းတိုင် သည် အားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည် ။အားလုံးသည်အဓိကပန်းတိုင်ကို
( ၂ ) ပန်းတိုင်ကို ကြိုးစားချီတက်ကြရာတွင် မိမိယုံကြည်ရာနည်းနာ မဟာဗျူဟာ ၊ နည်းဗျူဟာ
တူညီသောပန်းတိုင်အတွက်လူတိုင်း ၊အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမိမိယုံကြည်ရာ နည်းနာအတိုင်းလွတ်လပ်စွာ
မှာ မိမိအယူအဆသည်သာမှန်တယ်လို့ တရားသေဆုတ်ကိုင်ပြီးတခြားသူတို့အယူအဆသည်မှား
ယွင်းသည်ဟုယူဆကာ ရန်သူသဖွယ် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့အောင်၊သိက္ခာကျအောင် ၊ရှေ့တိုးလို့မရအောင်
လိုက်မတိုက်ဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ် ဒီလုပ်ရပ်ဟာ မိမိကိုလည်းအကျိုးမပြုသလိုသူများကိုလဲ
ကိုသာရမည်မှာမလွဲပါ၊ သမိုင်းမှာ မိမိအယူအဆကိုတရားသေဆုတ်ကိုင်ပြီး ငါမှန်တယ် ငါနဲ့မတူ
ငါ့ရန်သူဆိုပြီးသူ့အုပ်စု ၊ကိုယ့်အုပ်စု တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့တိုင်းပြည်ကြီးစုတ်ပြတ်ထွက်သွားလို့
ကျနော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ဦးတင်ဦး ၊ဦးဝင်းတင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယုံကြည်သူဖြစ်သည်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဖြစ်သည်၊ဤမျိုးဆက်သည်ကျနော့်၏ အသက် ၀ိဥာဉ်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်
တိုင်းပြည်အကျိုး ၊ ပြည်သူ့အကျိုးကိုအရင်းနှီးပြု၍ အစဉ်ထမ်းဆောင်လိုသောဆန္ဒဖြင့်
သန်းဝင်း ( ရကသ )
၁၂ /၁၃/ ၂၀၁၁
မှတ်ချက် --- ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ ၈၈မျိုးဆက်တရားဝင်အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်ရေးကို
Posted by သျှင်နေမင်း at 1:02 AM
ကွမ်းဓလေ့နဲ့ ကွမ်းစားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး
ကွမ်းဓလေ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေးယခင်မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကတည်း ကရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးမြန်မာတို့ရဲ့ အိမ်ဦးခန်းမှာ ကျက်သရေရှိစွာ ခန့်ခန့်ထည်ထည်နေရာယူထားတဲ့ ကွမ်းအစ်ကြီးနဲ့ ဧည့်သည်များကို ဧည့်ဝတ်ပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာတို့ရဲ့ အလှူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာလည်း ရပ်ရွာရဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်၊ အယဉ်ဆုံး အလှဆုံးသမီးပျိုကလေးတွေကို ကွမ်းတောင်ကိုင်၊ ပန်းတောင်ကိုင်အဖြစ် ပွဲထုတ်လေ့ရှိကြတာ မြန်မာတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ပါ။
မြန်မာတို့ရဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံတွေအနက် အတော်များများ ခေတ်မီတိုးတက်လာတဲ့ လူနေမှုစနစ်ကို အမီမလိုက်နိုင်တော့ဘဲ တစ်စတစ်စ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြသော်လည်း ကွမ်းဓလေ့ကတော့ မပျောက်ပျက်တဲ့အပြင် ပိုမိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဖြစ်လာတာမို့ ယနေ့ခေတ်တိုင် ကွမ်းယဉ်ကျေးမှုခေတ် လို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဆုံကြရင် ကွမ်းထုပ်ကလေး လက်ကမ်းပေးရင် နှုတ်ဆက်ကြတာ ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်နေ လို့ပါပဲ။
ယခုအခါ မြို့နယ်တိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ လမ်းဆုံလမ်းထောင့်တိုင်းမှာ ကွမ်းယာ ဆိုင်တွေနေရာယူပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရောင်းနေကြပါတယ်။ လူငယ် လူကြီး အသီးသီးကလည်း ပါးစောင်မှာ မြုံ့လို့ တစ်မျိုး၊ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ဆောင်ထားလို့ တစ်ဖုံ ကွမ်းကို မြတ်နိုးစွဲလမ်းစွာ စားသုံးနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဝေးပြေး ကားမောင်းတဲ့ယာဉ်မောင်းများက ခရီးဝေးကို မောင်းနှင်ရင်း အိပ်ငိုက်သွားမှာစိုးလို့ ကွမ်းကို မဖြစ်မနေ၀ါးကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွမ်းယာဆိုင်အချို့ကလည်း စားသုံးသူများစွဲလမ်းပြီး ပိုမိုအားပေးဝယ်ယူ စေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကွမ်းယာကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ပြုပြင်မွမ်းမံကြပါသတဲ့။ နို့မှုန့်ကိုကျိုပြီး ကွမ်းစားထုံးထဲမှာ ရောမွှေပြုပြင်လိုက်တော့ နို့ရနံ့လေးမွှေးပြီး ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တချို့က ပိုပြီးကောင်းသထက်ကောင်းစေဖို့ ပျားရည်တို့၊ သံပုရာရည်တို့ပါထပ်ပြီး ထည့်ထားသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး စွဲလမ်းစေဖို့အတွက် ဓာတုဗေဒဆေးတွေပါ ရောသမ မွှေထားတာမျိုးလည်း ရှိပါသတဲ့။
တစ်ခါ ကွမ်းစားဆေးတွေကိုလည်း မှတ်ပုံတင်မဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေ၊ မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးဝါး တွေထည့်ပြီး စားသုံးသူတွေ စွဲလမ်းစေဖို့ ပြုပြင်ထားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံက ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေနဲ့ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကွမ်းစားဆေးတွေကို နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို တရားမ၀င် အကောက်ခွန်မဲ့တင်သွင်းရောက်ရှိနေပါတယ်။ ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာ 92, 45 ၊ ဘုရင်မ၊ Signal ဆိုတဲ့ တံဆိပ်မျိုးစုံအဖုံဖုံကို ကွမ်းသမားတို့စိတ်ကြိုက် ၀ါးစေဖို့ ရောင်းချနေကြပါရဲ့။ ကွမ်းစားဆေးရဲ့ ရနံ့မွှေးက ကွမ်းသမားကို ဆွဲဆောင်နေသော်လည်း ဓာတုဗေဒဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် စားသုံးသူရဲ့ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာမို့ ကြောက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက တရားမ၀င်ရောက်ရှိလာတဲ့ Ready made ကွမ်းထုပ် တွေကလည်း ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာ လွယ်လင့်တကူချိတ်ဆွဲရောင်းချနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထုပ်ပိုးပုံစံကကောင်းကောင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရနံ့ကလည်း ကောင်းကောင်း ဆိုတော့ ကွမ်းသမားလူငယ်၊ လူကြီးတို့ စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်စွာ ၀ယ်ယူစားသုံး နေကြပါတယ်။
အင်းဝခေတ်မှာ ဖိုးသူတော်ဦးမင်း စပ်ဆိုခဲ့တဲ့ "တံတားဦးက ကွမ်းနုဝါ၊ ငန်းမြာကဆေး၊ ကွမ်းသီးတောင်ငူနဲ့ ကိုင်းထုံးဖြူပြည်ရှား၊ သာဝါးလို့ထွေး" ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာကွမ်းကဗျာမှာ ကွမ်းတစ်ယာရဲ့ အင်္ဂါရပ်များဖြစ်တဲ့ ကွမ်းရွက်၊ ဆေး၊ ကွမ်းသီး၊ ထုံးနဲ့ ရှားစေးတို့ကို ထွက်ရှိရာဒေသနဲ့ တကွ ဖွဲ့နွဲ့စပ်ဆိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် ကွမ်းယာများမှာတော့ ရှေးမြန်မာတို့ရဲ့ ကွမ်းယာမှာပါတဲ့ ရိုးရှင်းလှတဲ့ ပြည်တွင်းထွက်ကုန်များသာမက ပြည်ပက ဓာတုကွမ်းယာပစ္စည်းတွေကိုပါ ဖွယ်ဖွယ် ရာရာ ရောသမမွှေထားပြီး ကွမ်းသမားတွေကို ဆွဲဆောင် နေကြပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာကွမ်းတစ်ယာမှာပါဝင်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ အာနိသင်က ပိုးမွှားများ ကို သေစေတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ အခုပြည်ပက တရားမ၀င်အကောက်ခွန်မဲ့ ၀င်ရောက်နေတဲ့ ဓာတုဗေဒကွမ်းစားဆေးက မြန်မာ့ဆေးရွက်ကြီးထက် အာနိသင်ပိုမို ပြင်းထန်တဲ့အတွက် လူသားတို့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ ဆိုးကျိုးရလဒ် တွေရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံက တရားမ၀င်အကောက်ခွန်မဲ့ ၀င်ရောက်လာတဲ့ ကွမ်းစားဆေးတွေနဲ့ Readymade ကွမ်းထုပ်တွေရဲ့ အန္တရာယ်က မသေးပါဘူး။ ကွမ်းသမားတွေရဲ့ ကျောက်ကပ်တွေ၊ အသည်း တွေထိခိုက်ပျက်စီးမယ့် အန္တရာယ်နဲ့ မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးကို စွဲလမ်းမှုပြဿနာများမှ လွတ်ကင်းဖို့အရေး အကာအကွယ် ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါကြောင်း နှိုးဆော်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
written by ဒေါက်တာခင်ဦးမေ
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:47 PM
အမျိုးသမီးတယောက်ကအိပ်ပျော်နေစဉ်ဘီလူးတကောင်က ရောက်လာပြီဖို၊မဆက်ဆံသွားသည့် အဖြစ်မျိုးကို ရှေ့ တစ်ခေတ်ကလူသားတို့ လက်ခံခဲ့ ကြသည်၊စုံး ၊တစ္ဆေ၊မှင်စာ တွေကလည်းဤသို့ပြုလုပ်တက်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ဤလိုနှင့်အနေအထိုင်မတက်က
ဘီလူးက စိတ်ဝင်စားသွားလိမ့် မည်စသည့်အယူဝါဒများပေါ်ပေါကါခဲ့ သည်။
ဤဓလေ့ ၏ မူလအစမှာ.......
နတ်၊သိကြားတို့ ၊ နတ်ဘုရားတို့ တွင် အမျိုးသမီးများကိုသားသမီးရတနာပေးနိင်သည့် စွမ်းပကားရှိသည်ဆိုသော ယုံကြည်ချက်မှမြစ်ဖျားခံလာဟန်တူသည်၊(....)ဘာသာရေးကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင်၏ သာတော်များသည် လူသားတို့ ၏ သမီးများဆီသို့ သွားကြသည်ဟိုထားသည်။သို့ ကြောင့် လွန်ခဲ့ သော ခေတ်က သီလရှင်များထံ နတ်သားများကအလည်သာကြသည်၊ဖို၊မ ဆက်ဆံသည်ထိ ပြောဆိုခဲ့ ကြသည်၊အချို့ သော သီလရှင်များဆိုလျှင်၎င်းဝမ်းဗိုက်ထဲမှ ကိုယ်ဝန်ကို ဘုရားဝင်စားသလို၊နတ်သိကြားကပေးသနားသော် ရင်သွေးအဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ သော ခေတ်ကိုရောက်ခဲ့ ဘူးသည်။ရှေ့ ခေတ်လူစွမ်းကောင်းများ ဖြစ်ကြသော ဟာကြူလီမှအစ ယခုခေတ်ဘုရားများကိုပင် အပျိုစင်မှ မွေးဖွားလာသူများအဖြစ် ယနေ့ တိုင် ပြောဟောသူတွေရှိသေး၏။
ဘီလူး၊ သရဲ များကအမျိုးသမီးများကို ပူးကပ်ပြီ ဘီလူး၊ သရဲကလေးများကို မွေးဖွားတက်သည်ဆိုသော အယူအဆကရှိသေးသည်၊(.......)ဘာသာကွဲကိုတည်ထောင်သူ မာတင်လူသာ ဆိုသူကိုယ်တိုင်က ဘီလူးနှင် လူသာတို့ ဆက်ဆံနိင်သည်၊လူသားတို့ မွေးဖွားသောဘီလူးဆန်သောကလေးများမှာအဆိုပါ ဘီလူးများ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဟောပြောခဲ့ ဘူးသည်။
ဤလိုနှင့် အချို့ သော ဆေးဆရာများက ဘီးလူဟန်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးအချို့ နှင့် ဖောက်ပြားခဲ့ ကြသလို အချို့ ဆရာတွေကလည်းအဆိုပါအဖြစ်အပျက်မျိုးကိုတကယ်တမ်းယုံကြည်အောင် ဟောပြောခဲ့ ကြဘူးသည်၊ဤသို့ အလားတူ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေးအများကြီရှိသည်။
- အင်္ဂလန်နိင်ငံမှ ဖိုဒ့် ရှား ပြည်နယ်မှ အမျိုးသမီးတဦးသည် ဘီလူးလက်ချက်ဖြင့်ကလေးရရာက ကလေးမှာ ဘီလူးရုပ်ပေါက်နေပြီအသက်(၆)လအရွယ်တွင် သွားများအပြည့် အစုံထွက်နေသည်။
- ဆပ်ဖိုဒ်နယ်မှ အမျိုးသမီးတဦးက တရားရုံးတွင် လူနှင့် ဘီလူးဆက်ဆံခဲ့ သည်မှာနှစ်ပေါင်းကြာပြီ ၎င်း၏ရင်သွေးမျာအနက်သုံးဦးမှာဘီလူးကြောင့် ရရှိဖြင်းဖြစ်သည်စသည့် ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ကျမ်းကိုင်ပြောဆိုခဲ့ ပါသည်။
ဘာသာဘုရားကျောင်းများ ၀င်သည့် အခါ အမျိုးသမီးများ ဦထုပ်ဆောင်းပြီမှ ၀င်ရသောဓလေ့ က ရှိသေးသည်၊ဘုရားကျောင်း၌ကောင်းသောနတ်များ၊ရှိသလို၊နတ်ဆိုးများလည်ရှိသည်။ဦးထုပ်မဆောင်းသော အမျိုးသမီးများ၏နားရွက်များကနေတဆင့် အဆိုပါနတ်ဆိုးများက ၀င်ရောက်ကိုယ်ဝန်ရစေနိင်သည်၊ဒါကို ကာကွယ်ရန် ဦးထုပ်ဆောင်းကြသည်ဟု အဆိုရှိပါသည်။
ရှေခေတ်လူသားတို့ အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ကြသည့် အကြောင်းအရင်းကို ပြန်ကြည့် လျှင်ရာသီဥတုခံနိင်ဖို့ လှပစေဖို့ စသည့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးအနက်မကောင်းဆိုးရွာကောင်များဝင်မပူးနိင်အောင်အကာအကွယ်ဘဘောမျိုးဖြင့် ဝတ်ဆင်သူတွေလည်းရှိသည်။
အထူးသဖြင့်မကောင်းဆိုးရွာတွေ ဘီလူး၊သရဲ တွေ ကိုယ်ဝန်လာပေးမှာကို ကြောက်ရွံပြီး အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်သည့်လူမျိုးတွေရှိပါသည်။ဒီလိုနှင့် ရဟန္တာ စိန်(....) ကိုယ်တိုင်က မကောင်းဆိုးရွားတို့ က ဒုက္ခမပေးနိင်အောင် အမျိုးသမီးတွေကို အမှတ်အသားသဘောဖြင့် 
ဦထုပ်ဆောင်းကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ ဘူးသည်။
သီဟိုဋ်နိင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အတွင်းခံကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားကြသည်၊သူရဲ ၊သဘတ်တွေက လာရောက်ပြီဖို၊မ မဆက်ဆံနိင်စေရန်ဖြစ်သညိဆိုသည်။ အလားတူပင်အချို့ က ခါး၌ချည်းထားသော အဆောင်အယောင်းများသည် မကောင်းဆိုးရွားများကလိင်တန်ဆာကို အနှောက်အယှက်မပေးနိင်ရန်အတွက် အကာအကွယ်သဘောဖြစ်ပါသည်.....။ ။ ။
ပြည်တော်ပြန်ဖို့ကိစ္စများ၊ လက်စသပ် လုပ်ငန်းများကြောင့်ကိုယ်တိုင်ရေး ပိုစ့် အသစ်များ မတင်နိင်ခြင်းကို အနူးအညွှတ်တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ)
Posted by သျှင်နေမင်း at 4:24 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် မြန်မာ့ ကျက်သရေဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ိဝါဒကွဲကြသူတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သေချာတာတစ်ခုတော့ ပြောရန်ရှိ၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ကျက်သရေဆောင် ဖြစ်သည်။ ဒီအချက်ကိုတော့ဖြင့် ငြင်းစရာ ရှိလိမ့်မည် မထင်ပါ။
ဒီ့အတွက် သက်သေပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။
အခုလတ်တလော အမြင်သာဆုံးအဖြစ် ဟီလာရီကလင်တန်လာသော အဖြစ်ကို မြင်ကြည့်မိသည်။ ဟီလာရီဆိုသည်က ကမ္ဘာလှည့် သြဇာပေးနေသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး။ ထိုကဲ့သို့ ကျနော် အမြင်ရှိသည်။ တကယ်လဲ ထက်မြက်စူးရှသော မိန်းမတစ်ဦးပါပဲ။ အမေရိက၏ First Lady အဖြစ် ၈နှစ်ကြာစိုးစံခဲ့ရသည်။ နောက် သူမ၏ အိမ်နိမ့်စံဘ၀က သိပ်မကြာ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ရောက်ရပြန်သေး၏။ သမ္မတဖြစ်ဖို့တောင် လက်တစ်ကမ်းအလိုလေး ရှိခဲ့တာပဲ။ ပြောလိုသည်မှာ ဒီလို အမျိုးသမီးကြီးတွင် မာန်အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိလိမ့်မည်။ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့တွေ့ သူမ၏ အဲဒီမာန်ကို မြင်နိုင်သည်ဟု ကျနော် ထင်ပါသည်။
ဒီလိုနှင့် သူမက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ လာတွေ့ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမှာလက်ရှိ အထက်မြက်ဆုံးထဲများထဲတွင် အ၀င်အပါဖြစ်သော အမျိုးသမီးနှစ်ဦး တွေ့ဆုံပွဲ။
ကျနော့်ရင်ထဲကို ထိသွားသည်ကား သူတို့နှစ်ယောက်လုံး၏ ဟန်ပန်များကို ဖြစ်သည်။ တကယ့်ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေ တွေ့ကြသလို၊ ကွဲကွာနေသော မိတ်သင်္ဂဟများ ပြန်တွေ့ကြသလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိလွန်းလှပါသည်။ ဒီမှာတွင်ပင် ကျနော့်ခေါင်းထဲ စကားလုံးတစ်ခု ၀င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် မြန်မာ့ကျက်သရေဆောင်။
နိုင်ငံခြားရောက်သူတို့က ပြောကြသည်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ မိတ်ဆက်တဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည် ပြောပြမိတ်ဆက် ရတာမျိုး ရှိသည်တဲ့။ အိုဗားမား အာဆီယံစည်းဝေးပွဲလာတော့ ပြောလိုက်သည်မိန့်ခွန်းထဲမှ စကားများက ကျနော့်ရင်ကို ပိုထိရှသွားစေခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဖုန်းပြောပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဟီလာရီကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်မည့်အကြောင်းများ။ အိုဗားမားလို လူမျိုးကပင် အရေးတယူ မလုပ်၍ မရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပင် ရှာမှ ရှားလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လူမျိုးက ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ရှိနေ၏။ ကျနော်တို့ လူမျိုးဖြစ်နေ၏။ ကျနော်တို့လူမျိုးစစ်စစ် မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားခဲ့သူ ဖြစ်နေ၏။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေ မှည့်လေ့ရှိသော နာမည်မျိုးစစ်စစ် မှည့်ထားသူဖြစ်နေ၏။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့ကျက်သရေဆောင်ဟု တင်စားထိုက်ပေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထင်ရှားသော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ? ထိုအထဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ၏။ ကမ္ဘာမှာ ချန်လှပ်ထား၍ မရသော ခေါင်းဆောင်များထဲတွင် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှ တစ်ယောက်က အ၀င်အပါဖြစ်နေသည့်အတွက် ကျနော်တို့ ဂုဏ်ယူ ရပါသည်။
ကျနော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နားကလူ မဟုတ်ပါ။ သူ အခက်ခဲကြုံနေရစဉ်က မ၀န်းရံနိုင်ခဲ့သလို သူ မြင့်တက်လာသောအခါ ပြေးကပ်သူလည်း မဟုတ်ခဲ့။ အဝေးကြီးမှာ အေးအေးကြီးသာ နေပါသည်။ သို့သော် ကျနော့်ရင်ထဲမှာ ခေါ်နေမိသော စကားတစ်ခွန်းရှိ၏။ ကျနော်တို့အားလုံး၏ အမေ။
အမေဆိုသည်ကား ကျနော်တို့အား လုံခြုံမှုပေးနိုင်သူ၊ လမ်းပြသွန်သင်မှု ပေးနိုင်သူ။ နွေးထွေးမှုပေးနိုင်သူ၊ ဂုဏ်ကျက်သရေကို တိုးစေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတွင် မိခင်နှစ်ယောက်ရှိနေ၏။ တစ်ယောက်က
မွေးခဲ့သော အသက်ကို ပေးသည့်အမေ။ ပုဂ္ဂလဘ၀အတွက် ခိုကိုးရာ။ နောက်တစ်ယောက်က နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ သိက္ခာကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့ သည့်အမေ။ မြန်မာဟူသော ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ခိုကိုးရာ။
ဦးသန့်နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာကျော်တဲ့ မြန်မာမရှိဟု ပြောချင်နေသူများ၊ ယိုးဒယား၊ တရုပ်၊ ကုလားများကို အဖေခေါ်ချင်နေသူများအား မှားယွင်းကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေခြင်းက သက်ရှိထင်ရှား သက်သေပြနေပါသည်။ ကျနော့်တစ်ဦးတည်း သဘောပြောရပါလျှင် ယိုးဒယားက ကိုယ့်ထက်သာသည်ဟု ပြောလျှင် မချိအောင် နာလှပါသည်။ ယိုးဒယားမုန်းလို့ မဟုတ်ပါ။ အထင်ကြီးစရာဟု ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းပါ တစ်ဘက်နိုင်ငံလို ဖာနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုသောစကားကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စွဲခဲ့၏။ ယခု အဲဒီထက်ကိုယ်ကနိမ့်ကျနေပြီလို့ ပြောလာလျှင် အသက်ကို သတ်သည်ထက်နာ၏။ တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါသည်။ အာဏာလက်ရှိရှိသူ မဟုတ်ပါပဲလျက် (တစ်ခါမှ အာဏာမရခဲ့ဘူးပါပဲလျက်) ကမ္ဘာက ခုလို အလေးစားခံရသူမျိုး ယိုးဒယားမှာ ရှိသလား။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ရှိသလား။ သူတို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိသလား ဟုပင်။
ကျနော့်စိတ်ထင် ဟီလာရီ၏ မျက်ဝန်းများ၊ အပြုအမူများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အထင်ကြီး အလေးထားစိတ်ကို မြင်လိုက်ရသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုတစ်ချက်တည်းနှင့်ပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာဖြစ်ရတာ အတော်ဂုဏ်ယူသွားမိ၏။ ငါတို့မှာ ဒီလိုလူမျိုး ရှိနေတာပဲ။
ထို ဂုဏ်ယူစိတ်သည် စိတ်ခွန်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ ငါတို့လည်း ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ဒီလို အဖြစ်မျိုး တစ်နေ့မှာ ရောက်နိုင်တာပဲ။ ငါတို့ရဲ့ မြန်မာ့သွေး မြန်မာ့ဗီဇက ကမ္ဘာမှာ ဒီလိုအနေအထားရှိအောင် ထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်။ တို့မှာ လုပ်ရင်ဖြစ်တဲ့ ဗီဇမျိုးစေ့ရှိပြီးသား။ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်ဟူသော စိတ်များ ပွားများလာစေခဲ့၏။ အသက်ကို ကယ်လိုက်သည့်ပမာ ခံစားရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာစက ရွှေဂုံတိုင်ရုံးရှေ့တရားပွဲကို ကျနော်သွားသည်။ ခပ်ဝေးဝေးကမို့ အရိပ်သဏ္ဍန်မျှသာ မြင်ရပါသည်။ အသံဝိုးတ၀ါးမျှသာ ကြားရပါသည်။ သို့သော် ရင်ထဲတွင် ချမ်းမြေ့သော ညွှတ်နူးခြင်းဖြစ်မိသည်။
နောက်ပိုင်း ပဲခူးခရီးစဉ်မှာကျတော့ ကျနော်ကံကောင်းသည်ဟု ပြောရမည်။ ပဲခူးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ အလှူရှိလို့ ပဲခူးရောက်နေသည်နှင့် ကြုံ၏။ သူတို့အိမ်ကလဲ ရွှေမော်ဓောဘုရားနှင့် နီးနီးလေး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာမည်ကြားတော့ ကျနော်တို့ ရွှေမော်ဓောဘုရားမှာ စောင့်ကြသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလဲ အဝေးကပဲ နေလိုက်ပါသည်။ လူအုပ်ကား တော်တော်ပင် များ၏။ လက်တွေ တန်းလျက်သား ကာထားသူများကြားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ အနားက အဘွားကြီး တစ်ယောက် အော်လိုက်သံကို ကြားရသည်။
`ဟယ် ဟိုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လေးတော့´
တဲ့။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သဘက်ကြီး ခေါင်းပေါင်းထားသော အမယ်အိုကြီးတစ်ယောက်ကို မြင်ရသည်။
`နေပါစေကွယ်၊ ဒီကလဲ တွေ့ရသားပဲ´
ဆို၏။ သူ့မျက်နှာကား ပြုံး၍နေသည်။ ကျနော် အနည်းငယ်စပ်စုမိ၏။
`အန်တီစုကို ခုလိုမြင်ရတော့ ဘယ်လိုနေသလဲ၊ အဘွား´
ဆိုတော့ ကျနော် မထင်မှတ်သော စကားတစ်ခွန်းထွက်လာသည်။ စကားက နှစ်လုံးတည်း၊ အတော်ထိရောက်သော စကားပါပေ။
တဲ့။ နောက်ဘာမှမပြောတော့ပဲ ကြည်နူးသော မျက်ဝန်းများဖြင့် ဆက်ကြည့်နေလေ၏။
မိမိရင်သွေးတစ်ယောက်အား ကြည့်နေသလို မေတ္တာလွှမ်းသောအကြည့်များဟု ကျနော်ခံစားရပါသည်။ အမေစုသည်ကား ကျနော်တို့လို ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အမေသဖွယ် ခံစားရသလို အဘွားအရွယ် အဖိုးအရွယ်များအတွက်တော့ သမီးသဖွယ်ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သူ။ မြန်မာတည်းဟူသော မိသားစုအတွင်းမှ အတောက်ပဆုံး မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါချေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ခြံတံခါးဝတွင် စက္ကူပြားကလေးကိုင်ကာ ရိုက်ထားခဲ့သောပုံ။ `ကျမကလဲ ပြည်သူတွေကို ချစ်ပါတယ်´ ဆိုသော စာတမ်းပါဓာတ်ပုံကို တော်တော်များများ မြင်ဘူးကြပေလိမ့်မည်။ ပြည်သူတွေမှာလဲ ထောင်မပြဖြစ်သော စာတမ်းတွေ ကိုယ်စီရှိပါလိမ့်မည်။ ပြည်သူတွေကလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ပါတယ် ဟုရေးထွင်းထားသော စာတမ်းများပင်။
ဘာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူတွေ ချစ်ကြသလဲ? အမြင်အမျိုးမျိုး ရှိပါလိမ့်မည်။ ကျနော်ကတော့ မြန်မာ့ကျက်သရေဆောင်မို့ ချစ်ခြင်းဖြစ်၏။ တခြား သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အလေးအနက် ကျေးဇူးတင်မိသော်လည်း မြန်မာ့ကျက်သရေဆောင်မို့ ချစ်ခြင်းက ပိုပါလိမ့်မည်။
စကားစပ်၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်သွေးဖြစ်သော်လည်း ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုတော့ ကျနော်တို့ မချစ်ပါ။ ဦးအောင်ဆန်းဦး အင်တာဗျူးပါသော ဂျာနယ်ကိုလည်း မဖတ်ပါ။ စိတ်ထဲ နာနေသည်ဟုပင် ပြောရမည်လား။ ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ပြီ အဖရေဟု ဗိုလ်ချုပ်အား တိုင်တည်သော စာပိုဒ်ကို သူ့အား ကြည့်ကာ ရင်ကွဲမတတ်ရည်ညွှန်း သီဆိုနေသူများအား လျစ်လျူရှုခဲ့ရက်သူဟု မြင်ပါသည်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်မိသားစုနှင့်ကိုယ် အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ ရပါလျက် ဒုက္ခတွင်းသို့ ဆင်းလာခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျေးဇူးကို ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှ မေ့လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေ သူ့လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သဘော မတူသည်များ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုအခါမျိုးတွင် ငါ ဥာဏ်မမီလို့ပဲ နေမှာလေဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြေလျှော့မိ၏။ ကမ္ဘာက လက်ခံသော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံကို သူသာ တတ်သိ နားလည်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကား သူ နောက်လိုက်များ၊ သူ့ကို သစ္စာရှိစွာ ၀န်းရံကြရုံသာ ရှိ၏။
ကိုမင်းကိုနိုင်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့ ရောက်သွားစဉ်က ရောက်လာသူ ပရိသတ်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြတင်းပေါက်မှ မျက်နှာ ထွက်ပြခဲ့သည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ တကယ်ကို နေတစ်စင်း ထွက်ပြူလိုက်သလိုပါပဲ။ လူတွေကို ကြည့်၍ သိမ်မွေ့စွာ ပြုံး၍ သူ လက်ပြခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သော ဟန်ပန်နှင့်အတူ အဟုန်ပြင်းသော အားအင်တစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရသည်။
ကျနော့်စိတ်ထဲတွင် ပုံပြင်တစ်ပိုင်းတစ်စကို သွားသတိရလိုက်မိ၏။ လေနဲ့ တောင် ဘယ်သူ အစွမ်းထက်သလဲဆိုသည်က ထိုပုံပြင်ပါ မေးခွန်း။ ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင်တော့ တောင်ဆိုသည်က ထုထည်ကြီးသည်။ အင်အားရှိသည်။ အခြေတောင့်သည်။ တောင်က ခိုင်မာတယ် အင်အားကြီးတယ်လို့ ထင်ရမလိုပါပဲ။ သို့သော် ညင်သာစွာ အဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေသော လေက နောက်ဆုံး အင်အားကြီး ကျောက်တောင်ကြီးကိုပင် အစွမ်းမဲ့သော ကျောက်မုန့်အစအနကလေးများဖြစ်အောင် ခြေမွပစ်နိုင်ကြောင်း ပုံပြင်မှာ အဖြေပေးထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွင်လည်း လေကဲ့သို့ တည်ငြိမ်ညင်သာမှုရှိ၏။ ပြီးတော့ အဆက်မပြတ်သော ၀ိရိယရှိသည်။ အမိုက်မှောင်သည် ကျောက်တောင်ကဲ့သို့ ရှိပါစေ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခြေလွှင့်ပစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျနော်မျှော်လင့်ထားပါ၏။
မြန်မာပြည် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့စေမည့်ကိစ္စများအား တားဆီးနိုင်မည့်သူအဖြစ်လည်း ခံယူမိပါသည်။ မြန်မာပြည်သည် အာရှတွင် ထွန်းတောက်ခဲ့ရာမှ ပြည်တွင်းရေးပြဿနာများကြောင့် နောက်တန်းရောက်ခဲ့ရသည်။ သံထည်ကောင်းပါလျက် ထုတ်မသုံးနိုင်လို့မို့ သံချေးတွေတက်ကာ တုံးသလို ဖြစ်နေရသော ဓားတစ်စင်းလို ခံစားမိသည်။ ထိုဓား၏ ထက်မြက်မှုကို အသစ်ပြန်ဖြစ်စေရန်တော့ ကျနော်တို့အားလုံး ကြိုးစားကြရပါမည်။ ယင်းသို့ ကြိုးစားရာတွင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ဦးဆောင်သူနေရာက ပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်၊ကမ္ဘာတွင် ၀င်ဆန့်သော သူ့အရည်အသွေးများဖြင့် မြန်မာတည်းဟူသော ဓားတစ်စင်း ပိုမိုတောက်ပအောင် ထည့်ဝင်သယ်ပိုးမှုများစွာ ပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ထိုသို့ ယုံကြည်သောကြောင့်လည်း မြန်မာ့ ကျက်သရေဆောင်ဟု ကျနော် တင်စားမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေတော့သည်။
Posted by သျှင်နေမင်း at 3:16 AM